Abavelisi nabaThengi baseTshayina China UTianli
Uyisebenzisa njani ngokufanelekileyo impahla ekhuselayo?
Ukusetyenziswa kwesinxibo esikhuselayo kuhambelana kakhulu nobomi bethu kunye nempilo, ngoko ke kubalulekile ukukhetha iimpahla zokhuselo ezihlangabezana neemfuno ezisemgangathweni. Okwangoku, ezonaimpawu zaziwayo ziDupont zaseMelika, Merika Lakeland, 3M, Sperian, njalo njalo. Emva kokufumana iimpahla zokukhusela, ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kubaluleke ngakumbi.
Ingubo ekhuselayo iya kuba yome, icoceke kwaye ingabi nabuthuntu, kwaye umphezulu awunakubambeka, unendawo echetyiweyo, umngxunya kunye nezinye iziphene. Inxalenye yonxibelelwano lweempahla inokubhekisa kwiindlela zokwenza izinto ezinje ngokuthunga ngenaliti, ityhubhu kunye nokuxhoma ubushushu. Umngxunya wenaliti yenaliti uya kutywinwa. Isithuba seenaliti siya kuba zi-8 ukuya kwezi-14 ubude. Umkhondo wenaliti uya kuba nkqo kwaye uthe tye ngaphandle kokutsiba. Iindawo zokulungisa ezinjenge-adhesive, i-suture ye-ultrasonic kunye nomthungo oshushu ziya kuba zafulethi, zitywiniwe kwaye zingenaziqhuma. I-zipper yengubo nge-zipper ayizukuvezwa, kwaye intloko epeyintiweyo iya kuba izitshixa.
Iimpawu zokukhusela ezikhuselayo
1. Isikhuselo sonyango esilahliweyo senziwa kwizinto eziphezulu zomgangatho. Inomsebenzi wokulwa intsholongwane, ukuphefumla, uthintelo lwe-osmosis, ukuthintela ukungafumani manzi, kwaye ayibikho mthethweni.
2. Isikhuselo sonyango esilahliweyo sikulungele ukusinxiba xa sibonisa ubungqina bamanzi kunye neempawu ezinokuphefumla.
3. Ukufudumeza ukutywinwa kweklinikhi yerabha yekliniki kwenza elona nqanaba liphezulu lokukhusela.
4. Ubomi obude beshelufu kwaye kulula ukuyilahla, buyenza ibe yindawo enobuhlobo.
Isetyenziselwa ukuzala ukubulala intsholongwane, ukuhlala yedwa, uthuli kunye ne-ventilation, umsebenzi wangaphandle, ukuthintela ubhubhane kuluntu, ukubulala iintsholongwane esikolweni, njl.
Eyona nto ifanelekileyo yokukhuselwa isetyenziselwa iifama zeLifuyo, iifama zeenkukhu, umsebenzi wokuthintela ubhubhane, kunye nomsebenzi ongaphandle.
I-3m ii-Cover Cover ezinokulahlwa
Iindonga zokulahla ezilahliweyo
IiTallides ezilahliweyo zeTyvek
Izinto ezingafunekiyo zokuKhusela iintsholongwane
Impahla yokuKhusela imitha
Indawo yokulahla inkunkuma enokulahlwa